के कारण गर्भ रहँदैन ? महिला वा पुरूषमा को दोषी होलान् ? कारण यस्ता छन्
काठमाडौं । सन्तान नजन्मिदाँ एकले अर्कालाई दोश लगाउने गरिएको छ । जसका कारण परिवारमा निक्कै खटपट पनि हुने गरेको छ । औसतमा जँचाउन आउने २ सय महिलामध्ये दुईजनामा बाँझोपनको समस्या देखिन्छ ।
त्यसमा धेरैजसो पुरुषभन्दा महिलाकै स्वास्थ्यका कारण गर्भ नबसेको देखिन्छ । समस्या लिएर अस्पताल आउनेहरुको संख्या हेर्दा चार महिलामध्ये एकजनाको गर्भ नरहनुको कारण पुरुषमा रहेको स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ भने ३ जनाको समस्या महिलाकै कारण देखिन्छ ।
अहिले उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर कृत्रिम प्रक्रियाबाट समेत गर्भ राख्न सकिन्छ । जसलाई ‘इन–भिट्रो फर्टिलाइजेसन’ भनिन्छ । यहाँ प्राकृतिक गर्भ रहने विषय उल्लेख गरिएको छ । पहिला गर्भ रहन नसक्ने अवस्थाबारे विश्लेषण गरौं ।
महिलाको प्रजनन अंगमा अवरोध भयो भने गर्भ बस्दैन । महिलाको डिम्ब नै ननिस्केको खण्डमा समेत गर्भ बस्दैन । डिम्ब अस्वस्थ भयो भने र नियमित यौन सम्बन्ध भएन भने पनि गर्भ बस्ने सम्भावना रहँदैन । पुरुषको शुक्रकिट बन्यो तर गर्भ बस्नलाई चाहिने आवश्यक मात्राभन्दा कम शुक्रकिट भयो भने पनि गर्भ रहन्न ।
यसका लागि महिला महिनावारी समयको गणनाले सहयोग पुर्याउन सक्छ । महिनावारी भएको दिनको १० औं दिनदेखि २० औं दिनभित्रको समय बच्चा बस्नका लागि उपयुक्त समय हो । यो समयमा यौन सम्पर्क भए बच्चा बस्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।